Cunnooyinka ay tahay in la qaato si ay dib ugu soo noqdaan miisaanka kadib Kirismaska ​​| Ragga Stylish
Aadida cuntada kadib Kirismaska
Waxaa la joogaa waqtigii laga eegi lahaa muraayada oo la dhahayo: "sanadkaan qaab ayaan isku qaabeeyaa". Si loo gaaro himiladaan, xitaa iyadoo calooshaadu istareexsan tahay ciidaha xad-dhaafka ah, waa inaad si dhakhso leh ugu gudubtaa cunto kadib Kirismaska.
Muhiimadu waa qorshe wanaagsan, iyo awoodda iswaafajinta.
1 Talaabo talaabo
2 Jilicsan, jilicsan
3 Ha iloobin inaad biyo cabto
4 Ha ka boodin cuntada
5 Haddii aad shaki qabto, u tag takhasusle takhasus leh
6 Ku aadida cuntada kadib Kirismaska ​​adigoon ku mashquulin
Mid ka mid ah khaladaadkii ugu weynaa ee la sameeyay bishii Janaayo waa in si lama filaan ah loo joojiyo cunista. Yaraynta qaadashada cuntada iyadoon talo fiican laga helin waxay kordhisaa oo keliya walwalka iyo gaajada. Saameynta dib u celinta ee laga cabsado waxay yeelan kartaa cawaaqibyo aan loojeedo lahayn marka loo eego culeyska.
Qorshaha jimicsiga iyo howlaha jimicsiga jirka waa in dib loo bilaabo. Haddii kahor Diseembar howlahani aysan aheyn kuwa caadi ah, hadda waa waqtigii la bilaabi lahaa. Socodka ama orodka, ciyaarta tennis, socodka, socodka. Fursadaha ayaa badan. Ilaa qoob-ka-ciyaarku waa jimicsi wanaagsan, oo waxtar u leh miisaanka oo yaraada sida baaskiil wadista.
Ha iloobin inaad biyo cabto
Fuuq baxa ayaa ah qodob aad muhiim u ah, maahan oo keliya markaad miisaanka lumineyso, laakiin caafimaadka guud. Joogtaynta qadka, gubida kalooriyada, ka saarida sunta ama muruq fiican, waa wax aan macquul aheyn hadii aadan cabin dareereyaal kugu filan. Badi biyaha.
Isla mar ahaantaana, isticmaalka cabitaanka kaarboonka leh ama cabitaannada fudud ayaa loo keenayaa eber. Heerka sonkorta ee cabitaanadan caanka ah ee aadka u dhadhanka leh gabi ahaanba waa kuwo aan caafimaad qabin.
Ha ka boodin cuntada
Muhiim ayey u tahay cunista si isku dheeli tiran oo aan xad dhaaf ahayn waa abaabulka cuntada. Cunista si aan hagaagsaneyn, waqtigeeda ama ka daran, Ka-boodidda qaar ka mid ah cuntooyinka waaweyn ayaa waxyeello weyn u leh jirka aadanaha.
Haddii aad shaki qabto, u tag takhasusle takhasus leh
Muhiim ma aha inaad u tagto takhasusle si aad u ogaato cuntooyinka ay tahay in laga tirtiro cuntada maalinlaha ah. Si kastaba ha noqotee, weligeed waxyeello yar kuma gaadho. Intaas waxaa sii dheer, qorshaha la raacayo wuxuu noqon doonaa mid gebi ahaanba shaqsiyeed. Tani marwalba waxay noqon doontaa ikhtiyaar kafiican kan indho la’aanta ah inaad raacdo cunto adigoon xitaa ogeyn haddii jirku diyaar u yahay inuu wax ka qabto.
Ku aadida cuntada kadib Kirismaska ​​adigoon ku mashquulin
Haddii ay jiraan kiilo dheeri ah oo ka dhalan kara foosha dhammaadka Diseembar, waxaa muhiim ah in la xusuusto in dheeri this uusan lumin sida ugu dhakhsaha badan ee lagu helo. Sabirka iyo samirku waa furaha, iyo inaad miisaamto naftaada saddex jeer maalintii natiijooyinka ma dedejinayaan hawsha.
Ilaha Sawirka: Tababaraha Shakhsiyeed ee Internetka / Nolol Firfircoon
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Aadida cuntada kadib Kirismaska
Soo uruurinta kaabsolka Balenciaga ayaa timid Mr Porter
Bootsiyada leh lebbiska, isbeddelka Paris ee deyrta 2018